FAHATAPAHANA HISATRA TENY ISORAKA : Niraikitra teo amin’ny fiara ny tongotr’ilay voadona
Omaly alarobia maraina , teny Isoraka ambanin’ny biraon’ny Federasiona Malagasy ny taranja Baolina kitra no nitrangana lozam-piarakodia indray teto an-drenivohitra. 19 mars 2020
Fiara tapaka hisatra nandeha tamin’ny lalana “pavé” mitsororika midina any Anosy iny no niantombohan’ny loza raha ny loharanom-baovao voarainay. Vokany, tovolahy iray nitondra moto no voafaokany tamin’io fotoana io ka avy hatrany dia nifatratra tamina fiara iray nipetraka teny ambany.
Naratra mafy ilay mpitondra moto no sady niraikitra teo anelanelan’ny kodiarana sy ny “carrosserie” an’ ilay fiara voadona ny tongony. Minitra vitsy moa dia tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nizaha ny raharaha. Tsy misy aloha teto ny aina nafoy saingy manao antso avo amin’ny rehetra mandrakariva izy ireo mba ho mailo na amin’ny fanajana ny hafainganam-pandeha izany na koa ny fanatsarana ny kalitaon’ny fiara mandrakariva, hisorohana ny loza misesilany.
Raha tsiahivina dia vao tamin’ny fiatombohan’ity herinandro ity ihany koa teny Mahamasina no nisy lehilahy maty voafaokan’ ny fiara nandeha mafy izay niraikitra teo amin’ny maotera mihitsy ny vatana mangatsiakany. Mila mitandrina mandrakariva fa lahitokana ny aina.